Kulanka Baarlamaanka ee saaka oo dib u dhac ku yimid iyo wada hadalo dib u biloday. – Xeernews24
Kulanka Baarlamaanka ee saaka oo dib u dhac ku yimid iyo wada hadalo dib u biloday.
9. April 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa saaka markale uu dib u dhac uu ku yimid kulan lagu waday in xildhibaanada baarlamaanka isugu yimaadaan iyadoo kulankaasina uu ahaa mid uu guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Muudey uu isugu yeedhay xildhibaanada baarlamaanka.
Dib u dhaca kulankan ayaa oo soo baxay goordhow ayaa yimid, kadib markii kulan xalay saqdii dhexe illaa saaka waaberigii ay yeesheen Madaxweyne Farmaajo iyo guddoomiye Jawaari.
Kulan ay gelinkii dambe ee shalay yeesheen Madaxweyne Farmaajo iyo guddoomiye Jawaari ayaa guuldareystey waxana xildhibaanada isku magacaabay badbaado qaran ay ka digeen in saaka la qabto kulanka baarlamaanka.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada ayaa la sheegay inay sii tageen xarunta golaha shacabka inta aysan soo bixin warkan sheegaya in dib u dhac uu ku yimid mar kale kulanka baarlamaanka.
Ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo la xidhay waddooyin dhowr ah oo soo gala xarunta Golaha Shacabka, waxaana dadka ku soo tooseen wadadada Maka Al-Mukarama oo xidhan.
Xaalada ayaa u muuqata mid degan, iyadoo tan iyo xalay magaalada ay ka jireen xaalad siyaasadeed iyo mid amni.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in wada hadalada oo markii hore ku koobnaa Madaxweynaha iyo Guddoomiye Jawaari, inay dib ugu soo biiri doonaan Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddoomiye kuxigeenka 1aad.
Wararka qaar ayaa sheegaya in xaalada ay u muuqato inuu dhici doono is afgarad siyaasadeed oo tanaasul ku yimaada, taasoo laga yaabo inay dhacdo maalmaha soo socda.
Saddex jeer oo hore ayaa la baajiyay kulanka Baarlamaanka ee lagu muransanaa, iyadoo labada dhinac ee Xildhibaanada ay si aad ah isaga soo horjeedeen arrinta mooshinka.
Tan iyo bishii hore markii uu soo baxay mooshinkan ayaa dhaliyay xiisad siyaasadeed iyo mid amni, waxaana uu saameyn ku yeeshay magaalada Muqdisho.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/xildhibaan-533x261.jpg 261 533 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-09 07:27:292018-04-09 07:27:29Kulanka Baarlamaanka ee saaka oo dib u dhac ku yimid iyo wada hadalo dib u biloday.
Wararkii u dambeeyay Diyaaradii lacagta faraha badan u siday Imaaraadka oo la... Jawaari oo xilka baneeyey